BLOG : जनता नमार्न नेतृत्वलाई सुझाव - Ratopati
BLOG : जनता नमार्न नेतृत्वलाई सुझाव
आज पmेरि चारजना नेपालीको आफ्नै कर तिरेकोे पैँसाले किनेको बन्दुकले ज्यान लिएको छ । अर्कोतिर तिनै नेपालीका बर्दीधारी दाजुभाइ घाइते भई छटपटाउँदै बसिरहेका छन् । एक हुल युवा लिएर एकथरी मन्छेहरु देश दौडाहामा छन् । त्यस्तै कोठे हुल लिएर अर्का थरी समाचार सुन्दै बसेका छन् । समाचार माध्यमले कसैलाई मोर्चा, कसैलाई प्रतिपक्ष, कसैलाई सत्तापक्ष भनेर व्याख्य विवेचना गर्दै आएको छ । यिनै गतिविधिमा जति मान्छे सामेल भएका छन् तिनको सङ्ख्या थोरै छ । इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा सप्तरीमा २, ४ हजार होइनन् त्यहाँका असी प्रतिशतभन्दा बढी जनता न त आन्दोलनमा सरिक छन न त त्यस्ता अराजक शैलीका कार्यप्रति सहमत छन् ।
यो देश बहुदलीय व्यवस्थाले चलाउँदछ भन्दा के बुभm्न सकिन्छ भने यहाँ सर्वसम्मती नभएको खण्डमा बहुमत सङ्ख्याको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ र अल्पमतमा भएकाहरुको उचित सम्मान हुन्छ । तर स्थिति ज्यादै कारुणिक देखिन्छ । किनभने यहाँ बहुदलीय व्यवस्थाको ठ्याक्कै उल्टो सन्देश जानेगरी गतिविधीहरु सञ्चालित छन् । शान्तिक्षेत्र प्रस्तावित भएको यस बुद्घजन्मस्थलमा आफ्नै जनतामाथि टाउको र छाती ताकीताकी गोली बर्सिने परिस्थित आउँदासम्म सयौँ वर्षसम्म महत्व राख्ने विकासका योजना बनाइदिन्छौँ भन्ने जनताका दूरदर्शी प्रतिनिधिहरु मैले बोलेको कुराले अहिले भर्खरै के हुँदैछ भन्नेसम्म आँकलन गर्न नसकेको देखिँदा देशमा विकराल समस्याले जरो गाडेको भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले आन्दोनरत मोर्चा तथा आफ्नो राजनीतिक अभियानमा क्रियाशील प्रतिपक्षी दल दुवैतर्फ आम बुद्घिजीवीहरुको खाँचो छैन ।
सबैतिर पढेलेखेका युवाको जमात छ । तर विडम्बना हामी पढेलेखेका युवा किन आफ्नो नेतृत्वको ढिपीलाई सजग बन्नसम्म सुझाउँदैनौ ? मधेसका थारु नेपाली नै हुन्, मधेसी नेपाली हुन्, हामीले नागरिकता दिएका सबै नेपाली नै त हुन । यदि मानबीयता सम्म प्रकट गर्न सकिन्नथ्यो भने हामीले किन उनीहरुलाई नेपाली नगरिक बनायौ ? विधिसम्मत तरिकाले नागरिकता दिइसकेपछि जब आफ्नो थात थलो बनाएर सदियौँदेखि मान्छे बसोबास गर्दै आएको छ भने अहिले उ कसैले भन्दैमा किन र कहाँ जान्छ ? आफ्नो भर पर्दा तिनै भोटर नत्र भने सबै खत्तम भन्ने प्रवृत्ति हाम्रो सामाजिक राजनीतिभित्र छिरेको मनोरोग हो । तराईका बहुसङ्ख्यक तराईवासीले अधिकार खोज्नु गलत होइन तर कहीँ कतै बिग्रेको छ भने आफ्नै नेपालीलाई सभ्य भाषामा बुझाउन सकिन्न कि भन्ने ठान्नु हुदैनथ्यो । सबैको चित्त बुझ्ने राज्य व्यवस्था तयार पारौँ भनेर जनादेश प्राप्त भइसकेपछि इमानदारीपूर्वक जनताको पक्षमा काम गरिदिँदा केही बिग्रिन्नथ्यो होला ।
नेपालमा बस्ने सबै नेपाली राष्ट्रियता बलियो भएको देख्न चहान्छन् । आफ्नो मौकाको फाइदा उठाउने अन्धराष्ट्रवादी सोच कसैको छैन र हुन सक्तैन । यदि त्यस्तो भयो भने राज्य व्यवस्था मुखदर्शक बन्ने खालको हुने छैन भन्ने कुरोको चुरो सबै पढे बुझेका युवाहरुले आफ्ना नेताहरुलाई सम्झाई बुझाई गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशमा भइरहेका सम्पूर्ण घटनाहरुको जिम्मेवार युवा तथा बुद्धिजीवी वर्ग नै हुन् । किनभने सबै घटनाहरुमा युवाहरुकै साथ छ । नेतृत्वलाई शक्ति प्रदान गर्ने कार्यकर्ताले नै हो । त्यसैले कार्यकर्ता पङ्क्तिले आफ्ना नेताहरुलाई आफूले स्वच्छ मनले बुझेको कुरा राम्ररि सुझाएको खण्डमा बर्तमान राजनितिक अपरिपरिपक्वताको अन्त्य हुन सक्दछ ।
जतिसुकै नयाँ बहस र नयाँ नेतृत्वको खोजि गरेपनि हाम्रो राज्य व्यवस्थाले यिनै पुराना अनुहार दोहरिने ग्यारेन्टी गरिसकेको छ । तशर्त आजको रक्तपातपूर्ण स्थितिवाट पाठ सिक्दै सबै नेपाली जनता राष्ट्र प्रति बफादार छन, सबैको इच्छा यो देश बनाउनु छ र यहाँ सबैको हितकारी व्यवस्थाको सम्मन हुन्छ त्यसैले आफ्ना होडबाजी र बेमौसमे ढिपी छोडेर सम्मानजनक तरिकाले देश र जनताले दिएको जिम्मेबारी स्वच्छ र निश्पक्ष ढङ्गले गरिदिन आफ्नो नेतृत्वलाई पढेबुझेका युवाहरुले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुसुकै आन्दोलनमा आखिर मरिने सर्वसाधारण नै हुन् । त्यसैले जतिसक्दो आफ्ना कठोर निर्णय लिन खप्पिस नेतृत्वलाई सही सुझाव दिन सक्छौ । त्यति चाँडो हाम्रा छरछिमेकमा दिनहँु हुने रुवावासी कम हँुदै जानेछ । अन्यथा देशको स्थिति गलत ठाउँमा अवतरित भई प्राप्त उपलब्धीसमेत गुम्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
नयाँ शक्तिका संयोजकलाई गोरखाबासीको पत्र
निर्वाचनको बहसमा चरित्रहत्या
दलहरुका घोषणापत्रमा बेरोजगारी समस्या
काङ्ग्रेसभित्र मौलाएको काङ्ग्रेसीपना
कोरियामा प्रवासी मजदुरको अवस्था
सत्ता हस्तान्तरणबारे केही शङ्का !